काठमाडौं । मुलुकमा २ देखि ८ लेनसम्मका सडक बनाउँदा बेवास्ता गरिने साइकल लेन निर्माणलाई ललितपुर महानगरपालिकाले भने प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । साइकल लेनको चर्चा चले पनि चक्रपथभित्रका मुख्य सडक तथा मुख्य राजमार्गमा समेत हालसम्म छुट्टै साइकल लेन निर्माण गरिएको छैन । यो अवस्थामा उक्त महानगरले साइकल लेन विकासका लागि निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको छ । गत शनिवार महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले लेन विकासको उद्घाटन समेत गरिसकेका छन् ।
ललितपुर महानगरले पहिलो चरणमा साइकल लेनको विकासका लागि रमित कन्स्ट्रक्शन प्रालिलाई रू. ३५ लाखको ठेक्का दिएको छ । हाल कम्पनीले काम शुरू गरिसकेको महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताए । थापाथली पुल–कुपन्डोल–जवलाखेल–लगनखेल–मंगलजबारमा पहिलो चरणमा १ दशमलव ५ मिटरको साइकल लेन विकास गर्न लागिएको जानकारी उनले दिए ।
‘साइकल चलाउने रूटको काम शुरू भइसकेको छ,’ प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘पहिलो चरणको लेन विकासको काम ३ महीनाभित्र सक्नेगरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ ।’ साइकल पार्किङका लागि ५० ओटा स्ट्यान्ड तयार भइसकेको जानकारी उनले दिए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा यस्ता १०० ओटा स्ट्यान्ड बनाउने योजना छ । यसका लागि रू. ५ लाख बजेट विनियोजन भइसकेको उनले बताए ।
अहिले उक्त रूटको साइकल लेन रेखांकन (छुट्ट्याउने) कार्य भइरहेको महानगरपालिकाले बताएको छ । पहिलो चरणमा सञ्चालन हुने उक्त रूटको प्रतिक्रिया लिएर अन्य वडा तथा काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा साइकल लेन निर्माण अघि बढाउने योजना समेत महानगरको छ । ‘गोदावरी–बूढानीलकण्ठसम्म साइकल लेन विकास गर्ने योजना छ,’ प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘दोस्रो चरणमा साइकल लेनको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्बन्धित वडा÷नगरपालिका मार्फत गराउने तयारीमा महानगर छ ।’
तर सीमित क्षेत्रमा लेन बनाएर मात्र साइकल लेनको परिकल्पना सफल नहुने ट्राफिक इन्जिनीयर आशिष गजुरेलको तर्क छ । ‘पहिला पनि काठमाडौंको तीनकुने–माइतीघरसम्म साइकल लेन सञ्चालनमा आएको थियो, तर यो दीर्घकालीन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘दिगो रूपमा सञ्चालन र विस्तारका लागि साइकल लेनलाई सडक सञ्जालकै रूपमा विकास गर्न जरुरी छ ।’
ललितपुर महानगरको यो कदम सकारात्मक रहेको भन्दै गजुरेलले काठमाडौं र भक्तपुरलाई समेत जोड्नेगरी साइकल लेन विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गरी साइकल लेनको सञ्जाल बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
साइकल लेनको विकासले ‘साइकल सिटी’को परिकल्पना साकार पार्न सकिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।